Dal ay carruurta la iska soo xaaqo ka badan yihiin kuwa dhasha - BBC News Somali
Dal ay carruurta la iska soo xaaqo ka badan yihiin kuwa dhasha
Lahaanshaha sawirka PAARISA
"Dalka si furan ayaa looga hadlaa arrinta ah in ilmaha la iska soo xaaqo, waxaan xasuustaa mar aan ilmo iska soo xaaqayay oo aan u sheegay dhammaan asxaabteyda iyo qoyskeyga" ayay tiri Pia oo 19 jir ah kuna sugan dalka Greenland, mar ay la hadleysay BBC.
Shan jeer ayay ilmo iska soo xaaqday labadii sano ee ugu dambeysay
"Waxaan iska ilaalin jiray in aan uur qaado balse mararka qaar waan hilmaamaa arrintaas, hadda ma rabo carruur, waxaana dhigtaa Iskuul", sidaasi waxaa tiri gabar yar oo ku sugan caasimadda Greenland ee Nuuk .
Tan iyo sannadkii 2013-kii, waxaa dalkaasi ku dhashay carruur gaarayso 700 halka 800 oo la iska soo tuuray, sida ku xusan warbixin ay dowladda soo saartay, haddaba su'aasha la is weydiin karo waxay tahay, ma la oran karaa Greenland waa dalka ugu badan ay ka dhacaan kiisaska ilmaha la iska soo xaaqo?
Lahaanshaha sawirka CHRISTIAN KLINDT SOELBECK
Image caption Ardeyda ku nool caasimadda NuuK waxay maalin kasta oo Arbaco ah u yaqaanaan 'maalinka ilamaha laiska soo xaaqo'
Haweenka qaar wax welwel ah ma dareemaan
Greenland waa jasiiradda ugu weyn dunida, balse dadka ku nool tiradooda masii badno oo waxay gaarayaan 55,992 qof, sida lagu sheegay sahan la sameeyay bishii January ee sannadkan 2019-ka.
In ka badan kala bar haweenka ku nool Greenland waxay iska soo xaaqaan ilmaha, waxay arrintani ka dhigeysaa in 1000-kii haweenba oo uur leh, ay 30-kiiba ilmaha iska soo xaaqaan.
Marka la barbardhigo dalka Denmark, 1000-kii haweenba oo uur leh dalkaasi waxaa ilmaha iska soo ridaa 12.
Deegaan ay ku nool yihiin 27 kun oo carruur burcad ah
Greenland waa ismaamul balse waxay hoostagaan waddanka Denmark.
Dhaqaale xumida, ciriiriga dhanka guryaha iyo helidda waxbarasho tayo leh ayaa la sheegay in ay qeyb ka qaateen dhibaatadan balse wax sharaxaad ah oo dheerad ah kama sii bixin karto, dal ilmaha oo la iska soo xaqo ay caadi ka tahay, isla markaasna aad heli kartid fursad kuu sahleysa arrintaas.
Greenland, qaar kamid ah dumarka wax welwel ah ma dareemaan marka ay ilmaha iska soo xaaqaan.
Image caption Inkasta oo ay Greenland hoostagto Denmarka, waxay leeyihiin baarlamaan u gaar ah
Maalinka ilmaha la iska soo xaaqayo
Maxay tahay sababta dumar badan oo ku nool Greenland ay ilmaha isaga soo xaaqaan?
"Gabdhaha aan saaxibada nahay waxay iska soo tuureen ilamaha, hooyaday waxay hadda ka hor iska soo xaaqday saddex ilmo oo aniga iga horreeyay, waxaa hadda nool oo kaliya aniga iyo walaalkey", ayay tiri Piia.
"Ardeyda ku sugan caasimadda Greenland waxay maalin kasta oo Arbaco ah gaaraan xarumaha caafimaadka taas oo ay ku tilmaamaan 'maalinta ilmaha la iska soo xaaqo'" waxaa sidaas sheegay Turi Hermannsdotti oo aqoonyahan sameynaya cilmiga PHD oo ku sugan halkaas.
Greenland ceeb kama aha arrintan balse waa arrin dhaqan u ah dumar badan marka ay uur qaadaan.
Lahaanshaha sawirka Media for Medical
Image caption Greenland waxaa bilaash ka ah dawooyinka ka hortagga uurka
Xarumaha la isaga soo xaaqo ilmaha oo bilaash ah
"Marka ilmaha la iska soo xaaqayo waa bilaash, waana arrin fudud" ayay tiri Piia oo BBC la hadleysay.
Stine Brenoe waa dhakhtar ku takhasustay cudurada ku dhaca haweenka, waxay ka howlgasha Greenland. Muddo sannado ah ayay baaritaanno ku sameyneysay arrintani waxay sheegtay, "Ku dhawaad boqolkiiba 50 haweenka waxay ii sheegeen in ay garanayaan dawada ka hortagga uurka, balse boqolkiiba 85 aysan aqoon u laheyn ama si khaldan ayay u isticmaaleen"
Sida laga soo xigtay daraasad la sameeyay, waxay muujineysaa in haweenka ku nool Greenland aysan isticmaalin daawada ka hortagto uurka.
Image caption Greenland waxaa haweenka loo ogolaaday inay ilmaha iska soo xaaqi karaan sannadkii 1975-tii
Tacadiyadda ka dhanka ah galmada
Waxay qof haween ah go'aansan kartaa in ay ka hortagto in ay uur qaaddo balse haddii uu qaab kufsi ah ku yimaaday, waxay cabsi ka qabtaa qoyskeeda waa haddii canugaas uu ku dhasho waddo aanan sax aheyn.
Rabshadaha ka dhex dhaca qoysaska ayaa inta badan ah dhibaato ka jirto Greenland, hooyooyin badan ayaa sheegay inay la kulmeen tacaddiyo, sida lagu sheegay daraasad uu sameeyay machadka Nordic ee ka faallooda arrimaha bulshada ee dalkaas.
Image caption Greenland, waa dhulka ay ku nool yihiin tirada dadka ugu yar dunida
Aqoonta la'aanta ku aadan ka hortagidda uurka
Inkasta oo dawooyinka ka hortagga uurka ay bilaash ka yihiin Greenland, waxa aanan isticmaalin haween badan.
"Hooyadeey, waliggey ma aanay igala hadlin caafimaadkeyga, waxaan isku arkay uurka aniga oo joogo Iskuulka iyo xilli aan la socday asxaabteyda", ayay tiri Piia.
Qoysas badan oo ku sugan Greenland ma qaataan dawooyinkan balse waxay u arkaan tagidda goobaha caafimaadka mid ceeb ku ah ama ay ku adagtahay arrintaas.
Image caption Isticmaalka Khamriga ayaa dhibaatada loo aaneynayaa
Goobta ugu badan ee laga soo tebiyay 'dadka isdila'
Marka laga soo tago kiisaska badan ee dumarka ilmaha iska xaaqo, Greenland waa meesha ugu badan ay dadweynaha is dilaan. 100,000-kii qofba waxaa is dila 83 qof sannad kasta, sida lagu xusay daraasad uu sameeyay jornaal caalami ah oo ka faalooda arrimaha caafimaadka oo lagu magacaabo,Circumpolar.
Inta badan kiisaska dadka is dilay waxay yihiin da'yarta ku nool Greenland.
Sannadkii 1953-dii, Greenland waxay ku biirtay boqortooyadii Danish, waxaana is baddal uu ku yimid dhaqaalihii iyo dhaqanka dalkaasi.
Image caption Haween kubad ku ciyaarayo Greenland
Sharciga u ogolanaayo dumarka in ay ilmaha iska soo xaaqaan
Sharcigan oo uu ka jiro Denmark, tirada haweenka ilmaha iska soo xaaqa ayaa ka yar Greenland.
Dhakhtar kasoo jeeda Norwey oo la yiraahdo,Johanne Sundby oo horey uga soo shaqeeyay Greenland ayaa sheegay inuu kasoo horjeedo sharciga u ogolaanayo haweenka in ay ilmaha iska soo xaaqi karaan isla markaasna arrinatani ay horseedi doonto halis weyn oo ka dhan ah nolosha hooyooyinka iyo dhallaan badan.